Wasiirku-xigeenka cusub ee wasaaradda qorshaynta qaranka oo xilkii la wareegay
Munaasabaddan oo ay ka soo qaybgaleen Wasiirka Wasaaradda Arimaha Dibadda Dr. Sacad Cali Shire, Wasiiru-dawlaha Wasaaradda Arimaha Dibadda Prof. Maxamed Mixile Boqore, Wasiir-dawlaha Wasaaradda Qorshaynta Cismaan Xasan Aw Jaamac, Safiirka Somaliland u fadhiya dalka Ethiopia Mud. Cali Ismaciil Xuseen (Cali shoombe), Masuulin iyo xubno katirsan shaqaalaha labada Wasaaradood ee Arimaha Dibadda iyo Wasaaradda Qorshaynta.
Ugu horeyn waxa hadalo amaan iyo soo dhawayn iskugu jira ka soo jeediyey madasha Wasiir-dawlaha Wasaaradda Qorshaynta Mud.Cismaan Xasan Aw Cali, isagoo ku bogaadiyey Wasiirku-xigeenki hore ee Wasaaradda Qorshaynta Mud. Kaysar Cabdilaahi Maxamed shaqadii fiicnayd ee uu soo qabtay qaranka, waxaanu Wasiirku-xigeenka cusub ee Wasaaradda Qorshaynta Qaranka Mud. Axmed Aden Ismaciil (Axmed Kayse) ku sifeeyey inuu yahay nin ka soo bixi kara xilka loo igmaday.
Intaa ka dib waxa hadalo kala duwan ka soo jeediyey Masuuliyiintii ka soo qaybgashay munaasabadda iyagoo labada masuulna u rajeeyey inuu xilalka loo kala beddelay u fududeeyo, waxaanay ku tilmaameen labada masuul hawlkarnimo iyo aqoon.
Wasiirku-xigeenka Wasaaradda Arimaha Dibadda Mud. Kaysar Cabdilaahi Maxamed oo munaasabada ka hadlay ayaa amaan iyo bogaadin u soo jeediyey Shaqaala waynaha Wasaaradda Qorshaynta isagoo xusay inay yihiin shaqaale aqoontoodu sarayso oo jecel inay wadankooda u shaqeeyaan kana door biday inay meel kale shaqo u raadsadaan, waxaanu shaqaalaha ku booriyey inay soo dhaweeyaan si fiicana ula shaqeeyaan Wasiirku-xigeenka cusub ee Qorshaynta.
Wasiirku-xigeenka cusub ee Wasaaradda Qorshaynta Mud. Axmed Aden Ismaciil (Axmed Kayse) ayaa dhankiisa warbixin dheer oo uu jeediyey kaga waramay muhiimadda iyo baaxada shaqo labada Wasaaraddood.
Gabagabadii munaasabadda waxa halkaasi hadalo ka soo jeediyey Wasiirka Arimaha Dibadda JSL Dr. Sacad Cali Shire ayaa ku amaanay labada masuul isagoo ku tilmaamay inay yihiin niman aqoon iyo daacadnimo leh. Dhanka kale Wasiir Sacad ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in Wasaaraddahu ay ku shaqeeyaan nidaam hufan oo masuuliyadda la wada wadaagayo si aanay shaqadu u noqon ayuu yidhi mid u xidhan hadba wasiirka xafiiska fadhiya oo kaliya.
intaa ka dib Wasiir Sacad waxa uu xilka u kala wareejiyey labada Wasiirku-xigeen iyadoo halkaasna ay shaqaalaha labada Wasaaraddood shahaadooyin ku gudoonsiiyeen labada masuul.